အကောင်းဆုံး Professional ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များ ဘာဘာကတ်ကြေးတံဆိပ် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
ဇွန်အိုး ဇန်နဝါရီလ 28, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 8
တစ် ဦး ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဘေးထွက်မှတ်စု, အမှတ်တံဆိပ်၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတင်း, တန်ဖိုး, ဒီဇိုင်းနှင့်မော်ဒယ်များစာရင်းအကြောင်းပါ။
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူ၊ ဆံပင်၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ (သို့) အိမ်မှဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းသည်မသင့်တော်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လူတိုင်း၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းကိုပေါင်းစပ်ထားပါသည်။
လျင်မြန်စွာအကျဉ်းချုပ် - ဆံပင်ကျွတ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်များ
အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်များမှအမြန်ဆုံးအဖြေရှာလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းပါဝင်သည့်စာရင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူ၊ ဆံပင်ညှပ်နှင့်အိမ်တွင်းဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်လိုအပ်ချက်များ။
သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ အမေရိကန်၊ နယူးဇီလန်၊ ဥရောပနှင့်အာရှတို့တွင်ရရှိနိုင်သောရောင်းအားအကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များမှာ
Jaguar Solingen ကတ်ကြေး (အများဆုံးဂုဏ်သတင်း & မတူကွဲပြားစုဆောင်းခြင်း)
ကျောက်တံတား (အကောင်းဆုံး Value Professional ဆံပင်ညှပ်)
Kamisori (ထူးခြား။ အစွမ်းထက်သော Professional Scissor Designs)
Feather (အကောင်းဆုံးသင်တုန်း + အခြေခံဂျပန်ကတ်ကြေး)
သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုစီသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်သူတို့၏အခွင့်အရေးများရှိသည်၊ ဆံပင်ကျွမ်းကျင်သူများကိုကျေနပ်စေပြီးအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမော်ဒယ်များကိုကမ္ဘာသို့ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာမှာဆံပင်အလှပြုပြင်သူနှင့်ဆံပင်ဖောက်သည်များ ၀ ယ်ခြင်းကြောင့်ကျေနပ်မှုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်သည်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်သူ၊ စျေးသက်သာသောစျေးနှုန်းချိုသာသောကြေးကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူများဖြစ်နိုင်သည်။ ဖောက်သည်ကျေနပ်သည်အထိအရေးမကြီးပါ။
သင်၊ ယူအက်စ်အေ၊ ဥရောပ၊ ကနေဒါ၊ ဗြိတိန်၊ Australiaစတြေးလျ၊ အာရှနှင့်နယူးဇီလန်၌ရှိပါကအကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်များကိုနိုင်ငံတကာမှရရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များစာရင်းကိုတည်ဆောက်နေပြီးပိုမိုသိရှိလိုပါကယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုစီ၊ သူတို့၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်းကိုနိုင်ငံတကာတွင်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များအကြောင်းအနည်းငယ် ပို၍ အသေးစိတ်လေ့လာကြပါစို့။
အချိန်ကိုဖြုန်းတီးခြင်းမရှိဘဲနံပါတ် ၁ မှစပြီးအကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်စာရင်းသို့ကျွန်ုပ်တို့သွားကြလိမ့်မည်!
1. Jaguar: နာမည်အကြီးဆုံးနှင့်မတူကွဲပြားသောကတ်ကြေးတံဆိပ်
Jaguar ဆိုလင်ဂင်၊ ဤနေရာတွင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကျော်ကြားဆုံး၊ ဂုဏ်သိက္ခာရှိဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်!
၎င်းတို့သည်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးပတ် ၀ န်းကျင်ရှိခဲ့ပြီးစျေးနှုန်း၊ စတိုင်နှင့်အသုံးပြုမှုအရကွဲပြားခြားနားသောကတ်ကြေးအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ သူတို့မှာလျှပ်စစ်ကတ်ကြေးရှိတယ် အဆိုပါ TCC အဆိုပါ Carecut!
ဤသည်ကို Jaguar ဆံပင်လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဒီဇိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏နယ်နိမိတ်ကိုဆက်လက်တွန်းပို့ပေးသောတီထွင်ဆန်းသစ်ဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျအပြည့်အဝ browse နိုင်ပါတယ် Jaguar ဒီမှာကတ်ကြေးစုဆောင်းခြင်း!
၂။ Juntetsu: အကောင်းဆုံးသောတန်ဖိုးထားသောဆံပင်ညှပ်တံဆိပ်
လူကြိုက်အများဆုံး Juntetsu မော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည် offset, ရွှေအထ နှင့် ညစီးရီး သံမဏိကိုယ်ထည်၊ ချွန်ထက်သောခုံးဖြတ်စက်များနှင့်အဆင်ပြေသော offset ergonomics များကိုအသုံးပြုသည်။
သူတို့၏ချွန်ထက်သောအစွန်းအထည်များကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး Juntetsu သည်ပြိုင်ဘက်များပြားသောမော်ဒယ်များကိုဆက်လက်ထုတ်လွှတ်သည် Joewell, Yasaka နှင့်အခြားလူကြိုက်များအမှတ်တံဆိပ်။
သငျသညျအပြည့်အဝစုဆောင်းမှု browse နိုင်ပါတယ် ဒီမှာ Juntetsu ဆံပင်ကတ်ကြေး!
3. Yasaka: လူသိအများဆုံးဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်
Yasaka ဆိပ်၊ ဤနေရာတွင်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဂျပန်၏အသက်အကြီးဆုံးနှင့်နာမည်အကြီးဆုံးဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ျာဘက်ထဲကကုန်ထုတ်လုပ်မှု နာရာ, ဂျပန်သူတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အဆင့်မြင့်ဂျပန်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည်။
ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်ဂျပန်ကိုဘော့နှင့်အလွိုင်းသံမဏိများကိုအသုံးပြုခြင်း၊ Yasaka ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ခြင်းအတွေ့အကြုံအတွက်ထူးခြားသောချွန်ထက်သော Clam ပုံသဏ္withာန်ဓါးဖြင့်လက်မှုပညာဆံပင်ကတ်ကြေးများ။
ဒီဇိုင်းများသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးအားလုံးမှာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ The Yasaka အထူးသဖြင့်သြစတြေးလျ၊ နယူးဇီလန်၊
သငျသညျအပြည့်အဝစုဆောင်းမှု browse နိုင်ပါတယ် Yasaka ဒီမှာဆံပင်ကတ်ကြေး။
4. Ichiro: ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတပ်ဆင်ထားသည့်တန်ဖိုးကြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ်
Ichiro ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သောဆံပင်ညှပ်ကိရိယာများကိုထုတ်လုပ်သည့်ဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောသံမဏိများကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ခုံးဓားများဖြင့်အထူးဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖန်တီးရန်အာရုံစိုက်သည်။
အဆိုပါ Ichiro ကတ်ကြေးတံဆိပ်သည်သူတို့၏အစုံများတွင်ရေပန်းစားသည်။ အထူးသဖြင့် ၂၀၂၀ နှင့် ၂၀၂၁ တွင်နိုင်ငံတကာရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်နှင်းဆီရွှေပုံစံဖြစ်သည်။
"ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းများ၊ အရည်အသွေးရှိသောထုတ်လုပ်မှု ... " ဖြစ်သည် Ichiroသူတို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်နှင့်သူတို့ကနိုင်ငံတကာမှပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်များပို့ဆောင်ခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။
သငျသညျအပြည့်အဝ browse နိုင်ပါတယ် Ichiro ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်စုဆောင်းခြင်း။
5. Kamisori: အစွမ်းထက်ကတ်ကြေးဒီဇိုင်းများနှင့်အတူထူးခြားသောအမှတ်တံဆိပ်
အဆိုပါ Kamisori ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးသည်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သူတို့ရဲ့ကျော်ကြားဆုံး Kamisori ဘာဘာဓားသူတို့သည်ထုတ်လုပ်မှုထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအရည်အသွေးမြင့်သံမဏိမှထုတ်လုပ်ထားသောထူးခြားသောမော်ဒယ်များကိုဆက်လက်ပေးအပ်သည်။
နှင့်နှိုင်းယှဥ်လျှင် Yasaka နှင့် Joewell, Kamisori ပိုပြီးရောင်စုံဒီဇိုင်းများကိုအာရုံစိုက်, နှင့်မော်ဒယ်တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကျော်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကန့်သတ်ထုတ်ဝေသည်။
သငျသညျအပြည့်အဝစုဆောင်းမှု browse နိုင်ပါတယ် Kamisori ဒီမှာကတ်ကြေး။
Mina သင်တန်းသားများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်အိမ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်အရည်အသွေးကောင်းသောဆံပင်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည်။
ပရီမီယံတစ်စုံအတွက်မြင့်မားသောစျေးနှုန်းကိုလူတိုင်းမပေးလိုကြပါ၊ Mina သူတို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တတ်နိုင်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးနဲ့နေ့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လာပါတယ်။
စျေးပေါသည်အမြဲတမ်းကတ်ကြေးတစ်စုံကိုဖော်ပြရန်အပြုသဘောဆောင်သည့်စကားလုံးမဟုတ်သော်လည်း၊ Mina အထူးသဖြင့်လူကြိုက်အများဆုံးအပေါ်ကြယ် ၅ ပွင့်ရရှိသည် Umi ပုံစံနေဆဲတတ်နိုင်စျေးနှုန်းထိန်းသိမ်းနေစဉ်။
သငျသညျအပြည့်အဝစုဆောင်းမှု browse Mina ဒီမှာကဆံပင်ကတ်ကြေး။
7. Joewell: စိတ်ကြိုက် & ထူးခြားသောဒီဇိုင်းများအတွက်ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်
Joewell ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဒီနေရာမှာတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, ထိုသူတို့၏ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာမှတဆင့်ဆံပင်ကတ်ကြေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။
ရော်ဘာ coated လက်ကိုင်, ထူးခြားသော Joewell ဓါးသွားများ၊ ခြစ်ရာခံနိုင်သည့်ဝက်အူအဖုံးများနှင့်ထို့ထက်မက။ Joewell စုံတွဲအားလုံးနီးပါးတွင်တစ် ဦး တည်းသောကြိုက်နှစ်သက်ရာပုံစံကိုတီထွင်။ ပေးသည်။
အကောင်းဆုံးဂျပန်စတိုင်ဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည် Joewell။ ဆယ်စုနှစ်အတွေ့အကြုံကိုဂျပန်မှကတ်ကြေးတစ်စုံစီသို့ထည့်သည်။
သင်၏စုဆောင်းမှုအပြည့်အဝကိုကြည့်ရှုနိုင်သည် Joewell ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်!
8. Feather: ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး Razor & Basic Scissor Brand
အဆိုပါ Feather ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်, ဒီနေရာမှာတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်အရည်အသွေးမြင့်ဆံပင်သင်တုန်းနှင့်ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သည်။ သော်လည်း Feather အများအားဖြင့် ၄ င်းတို့၏သင်တုန်းများကိုလူသိများကြသည်၊ သူတို့ကပိုပိုပြီးလူကြိုက်များလာသည့်ဆံပင်ကတ်ကြေးများထုတ်လုပ်သည်။
သငျသညျအပြည့်အဝ browse နိုင်ပါတယ် Feather ဤနေရာတွင်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်စုဆောင်းခြင်း!
နိဂုံး - ၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ နှင့်အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များကားအဘယ်နည်း။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ကတ်ကြေးတံဆိပ်ဆောင်းပါးထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင်အကောင်းဆုံးသောကတ်ကြေးတံဆိပ်များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး သို့မဟုတ်အလုပ်သင်သည်ပိုနှစ်သက်လိမ့်မည် Mina ကပျကြေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူပိုနှစ်သက်လိမ့်မည် ကျောက်တံတား or Joewell.
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်အသစ်များနှင့်အသစ်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မော်ဒယ်များကိုထုတ်ပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအံ့အားသင့်စေပါသည်။ ယခုအချိန်အထိအရောင်းရဆုံးမော်ဒယ်နှင့်အတူအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ခဲ့သည် Mina နှင့် Umi မော်ဒယ်။ ဒါကအိမ်မှာဆံပင်ညှပ်ချင်တဲ့လူအများစုနဲ့ဆံပင်အလှပြုပြင်တာကိုအလုပ်သင်အဖြစ်သင်ယူတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ သြစတြေးလျတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း” ဟုမကြာခဏမေးလေ့ရှိသည်။ များစွာသောကုန်ပစ္စည်းများရှိပါကယုံကြည်စိတ်ချရသောအတွဲကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များတွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာခြင်းအတွက်ဆံပင်ကတ်ကြေးများပါရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုဂျပန်သို့မဟုတ်ဂျာမနီတွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များတွင်
Yasaka Seiki ဂျပန်ညှပ်
Jaguar Professional ကဂျာမနီ
ဒီတော့ဒီအမှတ်တံဆိပ်တွေကိုဘာကြောင့်ကျွမ်းကျင်တာလဲ ပါဝင်သည့်အချက်များ -
၎င်းတို့တွင်အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိများမပါ ၀ င်ခြင်း၊ ergonomics ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်မှိန်နေသောဓါးများရှိခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်သင်စျေးဝယ်မယ်ဆိုရင် Yasaka or Kamisori, သင်သည်ထိုသူတို့ကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်:
ချွန်သော bevel အစွန်းသို့မဟုတ်ခုံးအစွန်းဓါးသွား
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချသည့် offset ergonomics
အခြားသိသာထင်ရှားသည့်အချက်များစွာရှိသော်လည်းအထင်ရှားဆုံးအချက်မှာ "ဆံပင်ကိုညှပ်ပစ်မလား။ " နှင့်ဤညှပ်များအတွက်အဖြေအဓိပ္ပါယ်အဓိပ္ပါယ် "ဟုတ်သည်!"
ကတ်ကြေးတံဆိပ် စျေးနှုန်း အရည်အသွေး
Juntetsu ကတ်ကြေး $$ - $$$ မြင့်သော
Yasaka ကပျကြေး $$ - $$$ မြင့်သော
Jaguar ဂျာမနီ $$ - $$$ အနိမ့်မှအမြင့်သို့
Mina $ အလယ်အလတ်
Kamisori $$$ မြင့်သော
Joewell $$$ မြင့်သော
ဂျပန်ဆံပင်ကတ်ကြေးတံဆိပ်များနှင့်လူတို့၏ဝေဖန်မှုသည်သင်အလွန်များပြားလှသော overheads များအတွက်ပေးဆပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ဝယ်ယူခဲ့သောဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ တန်ဖိုးရှိဂျပန်ကတ်ကြေးတစ်စုံသည်အမှန်တကယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ကုန်ကျသော်လည်း၊
၎င်းကိုတင်သွင်းသည့်သြစတြေးလျားကုမ္ပဏီသည်သူတို့၏ ၃၀ မှ ၅၀% အမြတ်တိုးသည်
ဒီဒေါ်လာ ၁၅၀ ကကတ်ကြေးတစ်စုံဟာသြစတြေးလျမှာရှိတဲ့စင်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအလွန်အမင်းလန်းလန်းလွန်းသဖြင့်မင်းကိုဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကုန်ကျစေတယ်။
၎င်းသည်၎င်းဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ သို့သော်အခြားထုတ်လုပ်သူများကထို Japan ၏ Hitachi သံမဏိကိုယ်ထည်ကိုလုံခြုံအောင်လုပ်ပြီး overheads ကိုလျှော့ချရန်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်သည်။
ဒါကအစဉ်အမြဲသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး သင့်တွင်မကြာခဏအရည်အသွေးညံ့သောတရုတ်ကတ်ကြေးများရှိသည်၊ သို့သော်မကြာခဏ၎င်းသည်သံမဏိနှင့်အပိုပစ္စည်းများကိုဈေးပေါစွာဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်သင်ရှာနေသည့်အခါ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးတံဆိပ်များအထက်ဖော်ပြပါစာရင်းမှစတင်ပါ၊ သူတို့ဂုဏ်သိက္ခာရှိကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်မော်ဒယ်သည်သင့်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဆံပင်ညှပ်သူအဖြစ်သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါစေ။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ၊ ဆံပင်ညှပ်သူများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်အိမ်မှဆံပင်အလှပြင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်သည်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးကိုနိဂုံးချုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆံပင်ဝါသနာရှင်များအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်များကိုစာရင်းပြုစုထားပါသည်။
Jaguar Solingen ကတ်ကြေး: သူတို့ရဲ့တတ်နိုင်စျေးနှုန်းများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်သည်
Juntetsu ကတ်ကြေး: သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်များနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးသည်
Yasaka ကပျကြေး: သြစတြေးလျ၏အကောင်းဆုံးဂျပန်ကတ်ကြေးတံဆိပ်
Joewell ကပျကြေး- ဂျပန်မှရရှိသောအကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းအတွက်ကတ်ကြေးများ
နော B ဘက်စတာ
ဒီ site ရှိဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်ဖတ်ရှုခြင်း မှလွဲ၍ အခြားဆံပင်ကတ်ကြေးအကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ။ အကောင်းဆုံးကတ်ကြေးတံဆိပ်များ၏စာရင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ငါနှင့်အတူလိုက်သွားရမည် Ichiro ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာအတော်တန်ဖိုးကောင်းပုံရပြီးလှတယ် (အထူးသဖြင့်ရွှေစင်) ။ စကားမစပ်၊ ဒီဟာငါအချိန်ကာလအတော်များများမှာတွေ့ခဲ့သမျှထဲမှာအကြည့်အများဆုံးသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အရောင်နှင့်အာကာသကိုကောင်းစွာအသုံးပြုခြင်း။
ဘယ်အရွယ်အစားပါးလွှာညှပ်များကိုငါရသင့်သလဲ။ အကောင်းဆုံး thinning ကတ်ကြေးအရွယ်အစား
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 26, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 26, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
Thinning Shears သည် Blending နှင့်တူသလား။ ပါးလွှာ VS Blending ကတ်ကြေး
ဇွန်အိုး စက်တင်ဘာလ 26, 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 3